Madaxweyne Deni Oo Daahfuray Ololaha Urur Siyaasadeedyada Puntland - Bulsho News
Taaliban: Xukunnada dilka iyo gacma goynta ayaan soo celin donaa
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta daah-furay Ololaha Ururadda Siyaasadda Puntland oo todobaadkan ka bilaabanaya degmooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eyl oo ay ka dhici doonaan doorashooyin hal Qof iyo hal cod ah.
Madaxweynaha ayaa la wadaagay bulshada in shaqo adag laga soo maray in maanta lasoo gaaray ololaha ururadda Siyaasadda iyo codeynta dadweynaha oo ah riyadii bulshada Puntland oo rumowday, wuxuuna bogaadiyay Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC), Hay’adda PDRC , Dallada Ururadda Bulshada ee PUNSAA iyo dhammaan dadkii ka shaqeeyay shaqada wanaagsan ee qabsoontay.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in Dowladdu ka dhabeysay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland,si awooda shacabka loogu dhoweeyo oo ay madaxdooda usoo doortaan. Wuxuuna u mahadceliyay Ururadda Siyaasadda iyo Shacabweynaha Puntland isagoo u rajeeyay Bulshada tartan Caafimaad qaba.
Puntland gaar ahaan Saddexda Degmo ee kala ah Qardho, Ufeyn iyo Eyl waxaa todobaadkan ka bilaabanaya Ololaha Ururadda Siyaasiyadda Puntland oo socon doona muddo bil ah, waxaana degmooyinkaasi ka dhici doonta 25-ka October 2021, Doorasho qof iyo cod ah oo shacabku kusoo dooran doonaan Xildhibaanada goleyaasha deegaanka.
Taariikh cusub ayeey u tahay dadweynaha reer Puntland, Doorasho Qof iyo cod ah waa markii ugu horeysay ee ay ka hirgelayso Puntland, waxayna tani ka midtahay ballan qaadkii Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu sameeyay xiligiisii ololaha doorashada.
by Bulsho Media 44 mins ago 44 mins ago
by Bulsho Media 45 mins ago 45 mins ago
“Waan Ka Daalay Ku Guulaysiga Messi Ballon d’Or-ka:”Patrice...
U.S. hopes Abraham Accords will help Israeli-Palestinian issue...
Covid-19: Ninkii sameeyay “daawadii riyada uu ku arkay...
Blinken pushes back on GOP criticism of Afghan...
RASMI: Wakhtiga La Shaacin Doono Xiddigaha U Tartami...
Lix arrimood oo ku saabsan nolosha ‘Aabihii nukliyeerka...
Barcelona Oo Ronald Koeman U Qabatay Kulamo Uu...
Iran asked U.S. to unfreeze $10 billion to...
Rooble, Qoor-qoor Iyo Guudlaawe Oo La Kulmay Safiirka...
3 qodob oo laga soo saaray shir xasaasi...
The end of furlough will lay bare Britain’s...
GOP doc dispenses sketchy medical advice on virus...
Kulan 2 maalmood u socday Talibanka iyo Maraykanka
Hong Kong leader delivers final policy speech of...